Delphi, na Gris | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Greece, Ihe ị ga-ahụ
Gris bụ ebe onye njem ọ bụla na-agaghị echefu. O nwere ihe niile: gastronomy dị egwu, ọtụtụ akụkọ ntolite, ọtụtụ ọdịbendị na ebe ndị mgbe ochie dị ka nke ndị Ijipt. Otu n'ime ha nọ n'ime Delphi ma ọ bụghị n'efu ka UNESCO kwupụtara ebe a Ihe Nketa Uwa.
Anyị niile anụwo banyere ya ibu eboro delphi ruo oge ụfọdụ, ọ̀ bụ otú ahụ? Ntughari, ogugu n’iru, ihe omimi…. Na mgbakwunye na akụkọ ndị a site na oge ochie ma ọ bụ kpomkwem n'ihi ha, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ebe ị na-agaghị echefu.
1 Ihe ị ga-ahụ na Delphi
.Nnɛ obodo a dị n’otu ugwu nke Ugwu Parnassus, dị nnọọ nso na ebe a ma ama nke arụsị na ebe nsọ nke Apollo, nke dị nso na obodo Kastri na naanị 15 kilomita site Ọwara Ndị Kọrịnt.
N'oge ochie, ọnọdụ ya n'etiti ugwu ugwu mere ka o sie ike ịnweta, ya mere enwere ụzọ atọ iji banye na ya: site na Anfisa, site na Crisa na Boeotia. Ọ bụ otu obere obodo na-agbachitere ya site na ọdịdị nke ala ya, mana arụkwara ya mgbidi.
A maara ebe ahụ ịbụ ụlọ arụsị dị nsọ tupu ndị Gris oge ochie. Homer kwuru na ntọala nke ime ụlọ bụ ọrụ Apollo, onye chọrọ ịchọta nke dị nso n'Ugwu Parnassus, nwere mmasị n'ebe ahụ nke ukwuu wee wuo ụlọ nsọ ahụ. N'ezie, tupu ọ lezie anya ihicha ebe agwọ na nnukwu anụ, na-adọta ndị ụkọchukwu n'etiti ndị Krit na ịhazi ihe niile. Ma ọ bụ otú ha na-ekwu.
Eziokwu bụ na, na mbido, obodo Crisa na-achịkwa ebe dịpụrụ adịpụ na ebe nsọ ahụ, mana n'ikpeazụ, na-esote ebe nsọ ahụ, obodo ọzọ malitere ịmalite na, n'otu oge, chọrọ iweghara ya: Delphi. Ka oge na-aga Delphi dị mkpa karịa Crisa na ọdụ ụgbọ mmiri ya wee bụrụ a obodo di ike - ala. A họpụtara ndị ụkọchukwu nke ebe nsọ ahụ site na agbụrụ obodo ndị ekwesịrị ịbụ ndị sitere na Doric, yana ndị ọchịchị ha.
Enweghị ochichi onye kwuo uche ebe a ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ. Ọchịchị Delphi bụ a ọchịchị Chineke n’ihi na ihe niile gabigara n’ụlọ-nsọ ​​na ofufe ya. Ndị ohu na-arụ ọrụ ala ahụ ma ndị nchụàjà natara onyinye na onyinye sitere n'aka ndị eze bara ụba na ndị ahịa ndị nyochachara ọnụma ahụ. Ọ dịghị ihe anyị na-amaghị. Okwu mbu ahu bu ihe ama ama ya mere, mgbe ọ gbara ọkụ n’afọ 548 tupu a mụọ Kraịst, e kpebiri iji ebube mara ya wuo ya.
Ka oge na-aga, ndị Peasia ga-abịarute, ala ọma jijiji ndị na-ebibi ihe, ụfọdụ ọrụ mmanye ebe akụ nke ụlọ nsọ mara mma nke ọtụtụ, ụfọdụ na-apụnara mmadụ ihe na n'ikpeazụ Nero onye chiri otutu otutu ihe-oyiyi, kewapu ala nile n'etiti ndi-agha-ya ma kwusi okwu ahu. O were obere oge site na enyemaka Adriano mana n'ikpeazụ Theodosius nke I machibidoro ikpere arụsị iwu na 385. Mgbe Iso Christianityzọ Kraịst bịara, e chezọrọ ya ma leghaara ya anya.
Ihe omimi ihe ochie bidoro na narị afọ nke iri na itoolu n'aka ndị Germany ma anyị ji ha ụgwọ ọtụtụ ihe dị egwu na nke ugbu a na-aga n'ihu n'aka Schoollọ Akwụkwọ French nke Atens.
Ihe ị ga-ahụ na Delphi
Ebe ochie nwere ebe nsọ abụọ, otu raara nye Athena na nke ọzọ Apollo na ụlọ egwuregwu ndị ọzọ. Mgbe ị si Atens rute ozugbo, ihe mbụ ị ga-ahụ bụ ebe nsọ nke Athena Pronaia, tupu Templelọ Nsọ nke Apollo. N'ebe mgbidi ahụ ka nhazi nke Delphi gbatịpụrụ, ma n'ime mgbidi ahụ bụ ebe Tholos nọ, taa akara nke agwaetiti ahụ, na ihe fọdụrụ n'ụlọ arụsị atọ ahụ raara nye chi nwanyị.
E nwere ụlọ arụsị abụọ mere okenye malitere site n'etiti narị afọ nke asaa na 500 BC templelọ nsọ nke atọ nke ejiri limestone mebie site na ala ọma jijiji na 373 BC Ebe nsọ ahụ gụnyekwara ebe ịchụàjà nke Zeus, Athena Ergane, Athena Zosteria, Eileithyia na Hygeia na enwekwara foduru nke ụlọ abụọ raara nye ofufe nke ndị dike obodo bụ ndị chụpụrụ ndị Peasia n'àgwàetiti ahụ, Autonos na Phylakos.
Na mmekọrita na akụkọ ihe mere eme a enwere ncheta, a ihe akpụrụ akpụ nke eze ukwu bụ́ Hadrian na ụlọ a maara dị ka "ụlọ ndị nchụàjà." N'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke ebe nsọ nke Athena bụ mgbatị ahụ, ebe egwuregwu na ime ụlọ ịwụ. N’elu ugwu ahụ ka a na-enwe mmiri iyi, ndị mmiri dị nsọ nke Delphi na ndị njem na-agakarị ị drinkụ mmanya ma mee onwe ha ka ha dị ọcha tupu ha agawa ndụmọdụ.
Otú ọ dị, obi ebe ahụ bụ ebe nsọ nke Apollo, gbara gburugburu ya na mgbidi nke nwere ụzọ mbata dị na ndịda ọwụwa anyanwụ. Site ebe a Wayzọ Dị Nsọ ma-ọbụ ụzọ nke rutere Templelọ Nsọ nke Apollo na-amalite, nke bụ ebe ụkọchukwu na-ekwu amụma ya. N'akụkụ, e nwere mbara ala ndị nwere mgbidi na-echekwa ihe owuwu ụzọ mbata na ọtụtụ ihe ncheta ndị ewepụtara nye ndị ọgaranya na chi ndị Grik.
Ihe ndị a niile bụ ihe ncheta, ụfọdụ n'ime ha mara mma nke ukwuu, nke na-egosi ọkwa nka nke oge dị iche iche na akụnụba nke ndị nyere ya dịka ekele maka ọnụ. Enwere ọbụna ọla kọpa ma ọ bụ ọlaọcha, marble magburu onwe ya, ha dịkwa okomoko.
Ebe a bụ n'ezie ihe na-adọrọ mmasị ma zuru ezu ma ọ ga-abụrịrị ihe magburu onwe ya. Chee echiche na ịga n'ihu n'ụlọ nsọ ahụ enwere ụlọ ihe nkiri ebe egwu na ihe nkiri asọmpi mere na ọbụlagodi ka dị ka ámá egwuregwu maka asọmpi egwuregwu. Ihe dị egwu! Gbakwunye foduru nke ebe a na-eli ozu nke oge gboo na nke Rom ndị dị n'èzí na gburugburu ebe nsọ ahụ ị ga-anọ ogologo oge na-eje ije, na-ese foto na iche n'echiche.
Kedụ ka ị ga - esi nweta Delphi? Obodo Delphi nke oge a dị n'okporo ụzọ jikọrọ Amfisa na Itea na Aráchova. Ndị na-eme njem nleta na-esi n'akụkụ ụwa niile abịa n'ihi na ebe a na-amụ ihe mgbe ochie dị ezigbo nso. N'ime ya bụ Ihe mgbe ochie ochie nke Delphi ya na akụ̀ ya niile. Delphi ọ gafere awa abụọ site na Atens n'ụgbọala. Dika Delphi ka no na mpaghara siri ike nnweta ị na-erute n'ụzọ site n'okporo ụzọ na ihe kachasị mma bụ iji ohere njem ahụ mara ebe ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ Meteora na ebe obibi ndị mọnk ya.
Nwere ike ịgbazite ụgbọ ala ma ọ bụ jiri ụgbọ ala. A na-ekpuchi ụzọ Athens - Delphi na ọrụ isii kwa ụbọchị. Usesgbọ ala na-ahapụ Terminal B na Liossion Street na Athens site na 7:30 am ruo 8 pm. Nye njem ihe dị ka awa atọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Greece » Delphi, na Gris